AGM(AGM) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २१ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको फागुन २७ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत २१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा वीरगन्जको होटेल भिष्वामा बिहान ९ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ प्रस्तावित कुल १४.७३६४ प्रतिशत लाभांश...
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, यस्ता छन् अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो २४ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत २० गते आयोजना गर्ने निर्णय हो। सभा काठमाण्डौको भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा बिहान ९ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट ३ जना गरी ६ जना...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा चैत १७ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत १७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बालुवाटारस्थित आम्रपाली ब्यांक्वेटमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित कुल...
जानकी फाइनान्सको एजीएम आज, लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा आज फागुन २२ गते आयोजना गर्दैछ। सभा जनकपुरधामको जानकीचोकस्थित गायत्री कुञ्जको अतिथि सदनमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित कुल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७८९५...
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको स्थगित वार्षिक साधारणसभा पुनः आह्वान, अब कहिले ?
काठमाण्डौ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्स लिमिटेडले कोभिडका कारण स्थगित आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा पुनः डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको फागुन १९ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत १६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा ललितपुरको ललितपुर–९ ज्यापू प्रज्ञा भवनमा दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघि कम्पनीले गत पुस ३० गते वार्षिक...
सिटिजन लाइफले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आउँदो चैत ११ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेको हो। सभा काठमाण्डौको ठमेलस्थित छाँयादेवी कम्प्लेक्सको अलोफ्ट काठमाण्डूमा दिउँसो ३ बजेदेखि हुनेछ। सभाले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। सोही सभाले...
नेको इन्सुरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत ९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय (बीमा भवन) मा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि...
बेष्ट फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत ४ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मध्याह्न १२ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग...
एलआईसीको वार्षिक साधारणसभा आज, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडले आफ्नो १९ औँ वार्षिक साधारणसभा आज फागुन ११ गते आयोजना गर्दैछ। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित एलआईसी शिक्षालय हलमा बिहान १०ः१५ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर...
यसकारण जानकी फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा स्थगित, अब कहिले हुनेछ ?
काठमाण्डौ । जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा स्थगित भएको छ। कम्पनीले हिजो फागुन ७ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेको थियो। तर, आवश्यक गणपुरक संख्या अपुग भएकोले सभा स्थगित गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ। यसैबीच कम्पनीले स्थगित वार्षिक साधारणसभा पुनः फागुन २२ गते डोकेको छ। सभा जनकपुरधामको जानकीचोकस्थित गायत्री...
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २८ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको फागुन ६ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही फागुन ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको थापागाउँस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक...
नेशनल लाइफको एजीएम आह्वान, के छन् अजेण्डा ?
काठमाण्डौ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको फागुन ५ गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ३३ औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वानको निर्णय गरेको हो । बैठकले आगामी फागुन २९ गते आइतबारका दिन लाजिम्पाटमा रहेको कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा बिहान १०ः३० बजे वेभिनारमार्फत सभा आयोजना...
जोशी हाइड्रोपावरको स्थगित वार्षिक साधारणसभा फागुन ११ मा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले स्थगित वार्षिक साधारणसभा पुनः डोकेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक साधारणसभा पुनः फागुन ११ गते एकैपटक डोकेको हो। सभा काठमाण्डौको लिसारा रिसेप्सनमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघि कम्पनीले गत माघ ३ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेको थियो। तर,...